Maqaal: baaritaan ku saabsan arimaha mideynta reeraha | Somaliska
Warbixin muhiim ah: Baaritaan dheer oo aan samaynay ayaa waxaa soo baxaya in isku keenista caruurta iyo waalidiinta kala maqan sideey isula midoobi lahaayeen ay ku xeran tahay ogolaansho laga helo Xisbiga talada haya ee Xukuumada Ra’iisul Wasaaraha uu ka yahay Fredrik Reinfeldt taasoo yadadiilo weyn laga qabo. Goor dhaw ayaa Mika'ila Waltersson oo ka tirsan xisbiga cagaaran ee miljöpart-gu ku sheegtey wareeysi ay idaacadda P 1-ku la yeelatey in xisbigeedu rajo weeyn ka qabo in go'aano lagu diirsadaa ka soo baxaan wadahadalka u dhexeeya xisbigeeda iyo dawladda kaas oo la xiriira sidii Soomaalida loogu sahli lahaa in ay dalkaan keensadaan eheladooda dibadda uga maqan. Sidoo kale waxaa warkaasi mid ka duwan kasoo baxay todobaadkii hore Maxkamadda Sare ee dalkaan Sweden waxay mar labaad soo saartey go'aan dhaba tus ah, kaas oo ah in lagu sii socdo go'aankeedii hore oo ahaa, in dadka ehelkooda dalkaan Iswiidhan loo keenayo, lagu xiro shardi ah in ay heeystaan baasaboor iyo waraaqo aqoonsi oo la aqoonsan yahay taasoo ay adag tahay in Soomaalida sharuudahaasi ay soo buuxin karaan. Maxkamadda ayaa intaas ku dartey in haddii la rabo in dadkaas la siiyo xuquuqda bulshada Midoowga Yurub ku dhaqan ama daganaashaha ku leh sidii ilmahooda loogu keeni lahaa, go'aan siyaasadeed ayaa loo baahan yahay , sidaasna waxaa qorey wargeeyska maalinlaa ee Dagens Nyheter. Sida la wada ogsoon yahay Soomaalida dalkaan dagan ayaa ah dadka ugu badan oo uu go'aanka Maxkamaddaasi saameeyey, laga soo bilaabo bishii maarso ee sanadkii hore. Baasaboorka iyo waraaqaha aqoonsi ee soomaaliya ayuusan dalkaani aqoonsaneeyn, maadaama wax dawlad ahi aysan Soomaaliya ka jirin labaatankii sanee la soo dhaafey. Qiyaastii dhallaan Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 1,500 kun iyo shanboqol oo ilmood oo waalidiintoodna joogaan dalkaan Iswiidhan ayaa loo diidey codsiyadoodii la xiriirey, in ay eheladooda la midoobaan taas oo sabab looga dhigey in aysan heeysan waraaqa aqoonsi iyo baasabooro la aqoonsan yahay. Mikael Ribbenvik oo ah madaxa shuruucda ee hey'adda socdaalka ayaa sheegey, in go'aanka maxkamaddu , hey'addayada farayo in aanaan kooxna ka dhaafin shuruudahaas la xiriira waraaqaha aqoonsiga. Mikael Bibbenvik ayaa intaas ku darey in arrinkaani hadda yahay mid siyaasadeed, waa haddii la rabo in qofku helo xaqqa uu u leeyahay in ehelkiisa uu la midoobo, lagana hormariyo shuruudahaan la xiriira baasaboorada iyo waraaqaha aqoonsiga. Maxkamada Sare ayaa soo saartay in dhamaan soo galootiga ka imaanaya aduunka qeybahiisa kala duwan aanan la siinin oo la joojiyo Baasaboorka dalkan Sweden ee loo yaqaan främling passport (Baasaboorka la siiyo ajnabiga soogalayo Sweden) kaasoo mudo sannad ah kaliya shaqeeyo iyadoo lagu soo galo oo kaliya dalka Sweden. Främling passport waa kan la siiyo Soomaalida dadkooda usoo dacwooda ee inta badan ku imaan jireen dalkan Sweden marka ay kasoo socdaalayaan dal kale ayaa gabi ahaan la joojiyey. Hadaba maxkamada Sarre go’aankaasi waxba kama badali karto mar hadii sharcigaasi la baabi’iyey soomaalidana ma keensan karaan Passport shaqeynaya. Maxay tahay wadada kaliya ee furan mar hadii Maxkamada ay sheegtay inaan caqabadasi hal dal kaliya laga qaadi Karin waa mixni aad u weyn. Dad badan oo aan aniga ka mid ahay ayaa Maxkamada Sarre waxay go’aan ku gaartay in waaxda Socdaalka ay wax ka qabato arrimaha qoysaska kala maqan wadadda kaliya ee ii furan ayaa ah inaay DNA ii diraan balse waxa caqabada ugu horeysa ay noqotay markii aan la xiriiray ninka gacanta ku haya dacwadeeyda oo uu sheegay in ay ka war sugaayaan siyaasada oo wax laga badalo mar hadii Maxkamada Sarre ay dacwadeeyda kusoo celisay waaxda Socdaalka ayaa noqonaysa in DNA ay waxba taraynin oo hadii la ogaado in DNA uu sheego sida saxda ah aysan awood u lahayn inaay Passportiga la diiday ay kusoo safri karaan caruurtaasi. Wey iska cadahay in siyaasadda dalka Sweden ay tahay in ay wax kabadasho caqabadaha horyaala Soomaalida iyadoo maxkamada Sarrena ay soo saarayaan go’aano lid ku ah waaxda Socdaalka. Maxaa la gudboon Soomaalida? Sida ay ila tahay Soomaalida ku nool dalka Sweden waxaa la gudboon inaay samir yeeshaan kana war sugaan gudigaan loo xil saaray inaay soo baaraan sidii loo xadeeyn lahaa qaladaadka mar waliba ka dhaca waaxda Socdaalka iyo dacwoodayaasha Soomaalida ah. Waxa lagu maqan yahay waa in Soomaalida oo loo fasaxo caruurtooda waayna adkaan doontaa in si sahal ah lagu keeno carruuraha la korsado iyo kuwa guud ahaan aan la dhalin ee qaabab kala duwan loogu doodo. Warar kale oo madax banaan ayaa sheegaya in dhawaan ay soo bixi doonaan go’aano wax utaraya Somaalida oo dhan lamase oga waqtiga ay qaadan doonto, waxaase waxba kama jiraan ah warar la isla dhex marayey ee sheegaya in 2013-ka la furi doono isu keenista famiilka kala maqan, warkaasi ayaa naloo xaqiijiyey inaaysan waxba ka jiran oo gudiga ay hada gacanta kula jiraan. Maxamed Cabdulle Xasan “Siidi” soomaalidamaanta@live.com Borlänge – Sweden
Warbixin muhiim ah: Baaritaan dheer oo aan samaynay ayaa waxaa soo baxaya in isku keenista caruurta iyo waalidiinta kala maqan sideey isula midoobi lahaayeen ay ku xeran tahay ogolaansho laga helo Xisbiga talada haya ee Xukuumada Ra’iisul Wasaaraha uu ka yahay Fredrik Reinfeldt taasoo yadadiilo weyn laga qabo.
Goor dhaw ayaa Mika’ila Waltersson oo ka tirsan xisbiga cagaaran ee miljöpart-gu ku sheegtey wareeysi ay idaacadda P 1-ku la yeelatey in xisbigeedu rajo weeyn ka qabo in go’aano lagu diirsadaa ka soo baxaan wadahadalka u dhexeeya xisbigeeda iyo dawladda kaas oo la xiriira sidii Soomaalida loogu sahli lahaa in ay dalkaan keensadaan eheladooda dibadda uga maqan.
Sidoo kale waxaa warkaasi mid ka duwan kasoo baxay todobaadkii hore Maxkamadda Sare ee dalkaan Sweden waxay mar labaad soo saartey go’aan dhaba tus ah, kaas oo ah in lagu sii socdo go’aankeedii hore oo ahaa, in dadka ehelkooda dalkaan Iswiidhan loo keenayo, lagu xiro shardi ah in ay heeystaan baasaboor iyo waraaqo aqoonsi oo la aqoonsan yahay taasoo ay adag tahay in Soomaalida sharuudahaasi ay soo buuxin karaan.
Maxkamadda ayaa intaas ku dartey in haddii la rabo in dadkaas la siiyo xuquuqda bulshada Midoowga Yurub ku dhaqan ama daganaashaha ku leh sidii ilmahooda loogu keeni lahaa, go’aan siyaasadeed ayaa loo baahan yahay , sidaasna waxaa qorey wargeeyska maalinlaa ee Dagens Nyheter.
Sida la wada ogsoon yahay Soomaalida dalkaan dagan ayaa ah dadka ugu badan oo uu go’aanka Maxkamaddaasi saameeyey, laga soo bilaabo bishii maarso ee sanadkii hore. Baasaboorka iyo waraaqaha aqoonsi ee soomaaliya ayuusan dalkaani aqoonsaneeyn, maadaama wax dawlad ahi aysan Soomaaliya ka jirin labaatankii sanee la soo dhaafey.
Qiyaastii dhallaan Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 1,500 kun iyo shanboqol oo ilmood oo waalidiintoodna joogaan dalkaan Iswiidhan ayaa loo diidey codsiyadoodii la xiriirey, in ay eheladooda la midoobaan taas oo sabab looga dhigey in aysan heeysan waraaqa aqoonsi iyo baasabooro la aqoonsan yahay.
Mikael Ribbenvik oo ah madaxa shuruucda ee hey’adda socdaalka ayaa sheegey, in go’aanka maxkamaddu , hey’addayada farayo in aanaan kooxna ka dhaafin shuruudahaas la xiriira waraaqaha aqoonsiga.
Mikael Bibbenvik ayaa intaas ku darey in arrinkaani hadda yahay mid siyaasadeed, waa haddii la rabo in qofku helo xaqqa uu u leeyahay in ehelkiisa uu la midoobo, lagana hormariyo shuruudahaan la xiriira baasaboorada iyo waraaqaha aqoonsiga.
Maxkamada Sare ayaa soo saartay in dhamaan soo galootiga ka imaanaya aduunka qeybahiisa kala duwan aanan la siinin oo la joojiyo Baasaboorka dalkan Sweden ee loo yaqaan främling passport (Baasaboorka la siiyo ajnabiga soogalayo Sweden) kaasoo mudo sannad ah kaliya shaqeeyo iyadoo lagu soo galo oo kaliya dalka Sweden. Främling passport waa kan la siiyo Soomaalida dadkooda usoo dacwooda ee inta badan ku imaan jireen dalkan Sweden marka ay kasoo socdaalayaan dal kale ayaa gabi ahaan la joojiyey.
Hadaba maxkamada Sarre go’aankaasi waxba kama badali karto mar hadii sharcigaasi la baabi’iyey soomaalidana ma keensan karaan Passport shaqeynaya. Maxay tahay wadada kaliya ee furan mar hadii Maxkamada ay sheegtay inaan caqabadasi hal dal kaliya laga qaadi Karin waa mixni aad u weyn.
Dad badan oo aan aniga ka mid ahay ayaa Maxkamada Sarre waxay go’aan ku gaartay in waaxda Socdaalka ay wax ka qabato arrimaha qoysaska kala maqan wadadda kaliya ee ii furan ayaa ah inaay DNA ii diraan balse waxa caqabada ugu horeysa ay noqotay markii aan la xiriiray ninka gacanta ku haya dacwadeeyda oo uu sheegay in ay ka war sugaayaan siyaasada oo wax laga badalo mar hadii Maxkamada Sarre ay dacwadeeyda kusoo celisay waaxda Socdaalka ayaa noqonaysa in DNA ay waxba taraynin oo hadii la ogaado in DNA uu sheego sida saxda ah aysan awood u lahayn inaay Passportiga la diiday ay kusoo safri karaan caruurtaasi.
Wey iska cadahay in siyaasadda dalka Sweden ay tahay in ay wax kabadasho caqabadaha horyaala Soomaalida iyadoo maxkamada Sarrena ay soo saarayaan go’aano lid ku ah waaxda Socdaalka.
Maxaa la gudboon Soomaalida? Sida ay ila tahay Soomaalida ku nool dalka Sweden waxaa la gudboon inaay samir yeeshaan kana war sugaan gudigaan loo xil saaray inaay soo baaraan sidii loo xadeeyn lahaa qaladaadka mar waliba ka dhaca waaxda Socdaalka iyo dacwoodayaasha Soomaalida ah. Waxa lagu maqan yahay waa in Soomaalida oo loo fasaxo caruurtooda waayna adkaan doontaa in si sahal ah lagu keeno carruuraha la korsado iyo kuwa guud ahaan aan la dhalin ee qaabab kala duwan loogu doodo.
Warar kale oo madax banaan ayaa sheegaya in dhawaan ay soo bixi doonaan go’aano wax utaraya Somaalida oo dhan lamase oga waqtiga ay qaadan doonto, waxaase waxba kama jiraan ah warar la isla dhex marayey ee sheegaya in 2013-ka la furi doono isu keenista famiilka kala maqan, warkaasi ayaa naloo xaqiijiyey inaaysan waxba ka jiran oo gudiga ay hada gacanta kula jiraan.
Maxamed Cabdulle Xasan “Siidi”
Borlänge – Sweden
asc dhamaan aqiyaartta somaliska iyo aqristayaasha intaa kadib waxaan hubaa in is badal imaan doona mar dhaw insha alaahu ha sabran waalidiinta aan ka mid ahay waana hagaagidoonaan wax walba asc
asc walalkayow, qoraaga warbixinta dahabiga ah iyo mamulka webkan saxibkay jimacaale ,,waa WARBIXIN AAD UWANAGSAN SIDA AAD USHARAXDAY WAA WAX LA FAHMI KARO RUNTII,ILAAHAY HAYNOO SOO FUDUDEEYO WAXII KAHYR AH INSHA AALAH
asc jimcaale iyo dhamaan akhristayaasha sharafta leh walalayaal hala sabro wixii kheyrka ku jiro alla ayaa og waxaa laga yaabaa in ilmo halkan ku fasahaadi lahaa ama waalidkooda ku dhibi lahaa in ilaahey culays uga dhigay sidaan,
maxamed aweys maxamed says:
asc dhmaan sxbta sharafra leh waa wada salaamantihiin
dunidaan waa la yaab wax walbo somalida iydaa isku keentay waase laga bixi doonaa walaalayaa
qoossaska kala maqan ha sabraan wax walbo wey is badi doonaa mar dhaw
asc dhamaan waan salaamayaa akhayaarta awalan waa inaan saburnaa insha,allaah wixii khayrku jiro Alla ha ina waa fajiyo aamiin
Asc mahamed siidii waan salaamayaa walaalkeen qoraalka qiimaha leh uu soo diyaariyey allaha noo aqbalo mar ey noqotaba wey iska furmi doontaa waxaase guul u arkaa in arinteena ay cadahay maantey cidda aan ka sugeyno oo maxkamadii xataa dhinac isaga riixdey waxaan heysanaa halwaji inaan culeyska saarno xisbiga modaratka iyo xukuumada iinsha alaah qeyr ayeey ku dhamaaneysaa
Asc iqyaarta kuxiran webkan iyo Mr jimcale ok warbixintan u so qoray siidii horay ayan webkale uga aqriyay lkn waxan raba inan fikradeeda kubiriyo ok maqalka waxa kamid aha in arinta furaheda hayan isbaheysiga talada haya ok iyaga toos ma.ula xirirten sida ay wax uraban iyo jwbtoda waqtiga lafilayo webkin somaliska. jwbta waxa looga fadhiya Mr jimcale asc
asc dhaamntii ala cawa qoralkas waan kufarxay rajo ayuu igaliyay anorajobel tagan cawa hurdada xoga inan helanrajayn oo niyadu iidagto jimcale aad ban kusalamay wadnamahadsnatahay alaha kafrxiyo sidad ugu dadlayso arinka somalida runtii wxan oran kara waxad tahay soomali dhab ah marka la is waydinayo wakuma somali waa jimcalo kale ban orankara nooloow dadka ilamidka oo kalaqaran waxan leyahay websetkan kuxirnada warkisa runtii qlabiga nogudaga 2013 ban maqlayay waxn islaha matigidbadgosata oo coladii bad dib ugulabata sharcigoda intad uceliso talo way igu ciirsanyd runtii qalbigaygu wuxuu aha mid holad badan xanun badan uu kashidanyahay caloshayduna wxay ahayd mid aad isku bad badalysa hadba sheko niyadyda kushekaysnaysay xanunkas faraha badan oo somalida haysta hadii la qalilah labta sidaytahay waxakujira la is tuslahana dad badan aya soo bandhigilaha oo an anigu ugu horeyo runtii coladii xabdii tanaa iiga xanunbadan sababtoo ay tahay geridu wa xaq lakin waxan cuno iyo wxan kubarinaba wan islajognay qlabiguna wadagana hada waxan ujeda mugdi anan horay udaremayn xanun anan horay u arag fakar tarenka markan sooraco malinkasta waxan arka asago ila dhafay meshan usocday ama wan kysigta xanunkas dawladu madareemaysaa wamaya somaaliya hanoolato
siiidii mahadsanid dareenkaaga aad cabirtey. Lkn wax cusub ma sheegin coz waxaa dhahdey dowlada sweden ayey ku xirantahay arintaan taasna horey ayaa loo ogaa xitaa wasiirkooda socdaalka mowqifkiisa waan ognahay marka rajada adiga kuu muuqato alaha rumeeyo. Lkn xaalku shaxshax ilama aha, aniga koleey dadka aadka ugu txn pagekaan ayaan ka mid ahay adigana somaliweyn ayaad wax ku qori jirtey faalooyinkaagana ma xumeen lkn tan dadka hursiintooda aad u soo qalabqaadatey kkkk. Koley ani aabo aan ahay go,aan dambena ma sugaayo tahriib aan qorsheystey waana badanahay ee wasiirka ood haku soo wareejiyo sweden dadkana waxaan leeyahay hadii wixiina sax yihiin hanaga harina, somaliska.com guul
siidii cade markasta oo faalo aad qoreysid waxaad soo saaartaa sawirkaaga. Weligey jimcaale sawirkiisa kuma arkin mahaan. Teeda kale goormaa soomaaliya ka soo tagtey adigoo cali maxamed geedi ex PM xaafiskiisa ka shaqeeo aan ku ogaaye, waan ku salaamayaa rati cade. Gabadheydana waan ku siiyey kkkkkkk
A.s.c.oll MR.SIDII sxb waxatahay aftahan lkn shekadanu majokto sida admodo o weykafoktahay runti waxcusub oo loriyaqo madan kenin marka waxan layabanahay dadka ku riyaqayo marka pls hadan dadka uheyn wax an falo aheyn dadka hakadhadhicin in ey sabran o udaa jimcalahoda waxan kujeclahay jimc wiligis kuma sokobin iska sabra e dadalkena an si 2labno ayu dhihijiray marka adi nadaa pls
Sidi walalow yanan kuhabarin e wabsetyo kale kaqarabo waxan nahay walidin tiiran yeysan marka muhimadada ilahey melkala hakasiyo ankuduceyno ader macane medka lagama qarabto e jimcalahena nodaa plz o nada
MUDANE JIMCALE, salan sare salan kadib wili madan arak ano kacsan lkn iga rali noqo cawada waxa igu qasbay fahan badan walakey sidi ushek melusan dhurwagu ariga kugalin in uunagu galay ushek in anahay walidin kujirto jihad waxarif maqalkisa kumjiro wax laguqabsankaro obena hadana kumajirto wax logu riyaqikaro marka hana dayo waxarif dankale wata
May 19, 2011 at 01:47
Runti waxan kasexan la ahay fahanbadan waxat ogata MR SIDI In wabsetka somaliska ey wararkisa wabsetyo kale o waweyn sida casimadda.com iyo kuwakale ay si jokta ah uxiktan mana aysan taban maqalkan ulajedada kadanbeyso marka walal mar 2aad somaliska.com waxu ushaqeya walidin e watsolunta ee baltok iyo melahas ad o nadaaaaaaaaaaaaaplz
May 19, 2011 at 05:46
Saacid & Daade: Siidi waa ku mahadsantahay mowduuca uu soo qoray, Somaliska.com dhamaan mowduucyada aan u aragno in ay muhiimyihiin waan soo daabacnaa idinkana waad noo soo diri kartaan.
Balse waxaan idin leeyahay ka dooda mowduuca oo ka leexda shaqsiga. Siidi aniga ayaa sawirkiisa meesha soo saaray ee asagu igama codsan. Marka fadlan ka dooda ujeedada mowduuca ee yaan lagu mashquulin shaqsiga. Mahadsanidiin.
asc wad wada salaaman tihiin muslimiinta meel walbo ay dunida ka joogaan qaasatan soomaalida hadii aan fikradeyda ku darsado waa wax lagu farxo rajadana rabiga ayaan ka sugeynaa insha allaah mida kale aniga waxan soo jeedin lahaa in aan helno dad isku kalsoon oo u diyaar ah talaabo kasto oo aan wax kusoo bandhigi karno in aan helo taladeydana waxey tahey in aan kireysano laba bas oo aan ku aadno dalka ay sweden deriska la tahey ee norway si aan isaga dhiibno runtana ugu sheegno in aan leenahey sharci sweden lkn danta naga soo wadey ay tahey kadib markii ay inoo diideen in aan la midowno caruurteena waxaan aaminsanahey in ay dhabarjab ku noqon doonto oo uu waaga ku baryi doono ayna la yaabi doonaan aduunka oo dhan goortii la arko 50 qof oo sharci kuleh sweden hada magangelyo doon ah sababta ku kelifteyna ay tahey caruurtooda oo loo diidey sidaa daraadeed waxaan rajeyna inuu is bedel imaan karo hadaan anagu dadaalno wabillaahi towfiiq mahadsanidiin
waa mahadsantahay danjire jimcaale sxbkey siidii waan iskaga jimicsanaayey maahee waan ogahay waa weriye xikmad badan oo maqaalo badan qorey ulamana jeedi dhaleeceen ee waxaan cadeynaayey inaan soomaali ahay ilee in la caayo oo la colaadiyo qofkii wax fiican sheega waa waxa dalkeena u gaara ahe oo lagu gartaa, dowlada swedena waan tuseynaa inaan soomaali nahay saa qilaafka hadalka xun iyo qalooca aa ku filan cadeynta ayey iga tahay ok asxaabta waad maqleysaan danjire jimvaale hala dhowro anshaxa . Mahadsanid ambasador jimcaale waxaana ku sifeeyey webka somaliska halheyska channelka aljazeera oo ah , al minbaru man laa minbar lah, oo macnahedu yahay halka dadka aan codka laheen looga doodo,
qurbe naceeb says:
walaalayaal waa inlaga saaraa niyada wadama gaalad aad kunooshihiin ilmihiina ayaa lagadanaya marka sweedan ilaah dal idinkama digin wadan kawanaagsan ayaaladihiin oola dhaho soomaliya halo soolaabto oowadanka ayaa ubaahan dib udis iyo taageeroi shacabnimo byyyyyyyyyyyyyyy